Oct. 14, 2020 Updated: Oct. 14, 2020 8:54 a.m.
1of5FILE - In this Thursday, April 23, 2020 file photo, nurses cheer as a patient who had COVID-19 leaves the intensive care ward at the MontLegia CHC hospital in Liege, Belgium. Belgium's intensive care units will hit capacity by mid-November if new coronavirus cases continue to soar at the same pace, according to the country's health authorities.Francisco Seco/APShow MoreShow Less
2of5FILE - In this Thursday, April 23, 2020 file photo, a patient rests in the intensive care ward for COVID-19 patients at the MontLegia CHC hospital in Liege, Belgium. Belgium's intensive care units will hit capacity by mid-November if new coronavirus cases continue to soar at the same pace, according to the country's health authorities.Francisco Seco/APShow MoreShow Less
3of5FILE - In this Thursday, April 23, 2020 file photo, Belgian nurse Laura Crutzen, right, speaks with her head nurse, Yannick Hansenne, during break at the MontLegia CHC hospital in Liege, Belgium. Belgium's intensive care units will hit capacity by mid-November if new coronavirus cases continue to soar at the same pace, according to the country's health authorities.Francisco Seco/APShow MoreShow Less
4of5FILE - In this Thursday April 23, 2020 file photo, Belgian nurse Laura Crutzen works in the intensive care ward for COVID-19 patients at the MontLegia CHC hospital in Liege, Belgium. Belgium's intensive care units will hit capacity by mid-November if new coronavirus cases continue to soar at the same pace, according to the country's health authorities.Francisco Seco/APShow MoreShow Less
5of5FILE - In this Monday, April 13, 2020 file photo, medical personnel in protective gear prepare to receive a patient at a hospital in Antwerp, Belgium. Belgium's intensive care units will hit capacity by mid-November if new coronavirus cases continue to soar at the same pace, according to the country's health authorities.Virginia Mayo/APShow MoreShow Less